Neymar Oo Sheegay Hal Sabab Oo Arsenal Ku Gaadhi Karto Guul Iyo Qofka Uu Jeclaa Inuu Kubadda Ka Barto | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Neymar Oo Sheegay Hal Sabab Oo Arsenal Ku Gaadhi Karto Guul Iyo Qofka Uu Jeclaa Inuu Kubadda Ka Barto
Published on November 16, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(17-11-2018) X iddiga xulka qaranka Brazil ee Neymar ayaa aaminsan in Arsenal kusoo laaban doonto jidka guulaha oo ay hantiyi doonto koobab.
Neymar oo ku sugan magaalada London oo caawa uu xulka qaranka dalkiisa Brazil ciyaar saaxiibtinimo kula ballansan yahay Uruguay, ayaa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in Arsenal ay guulo gaadhi doonto inta uu macallinka u yahay tababare Unai Emery oo uu ku tilmaamay nin shaqo iyo karti badan.
Emery iyo Neymar ayaa kasoo wada shaqeeyey hal-xili ciyaareed kooxda PSG, waxaanay taasi ugu filnaatay laacibka reer Brazil inuu aamino kartidiisa iyo inuu koox kasta oo uu tago ka dhigi karo mid guuleysata.
“Hadda ay fududdahay (in Arsenal guuelysato), sababtoo ah waxay ciyaarayaan kubbad wanaagsan. Kulamadii u dambeeyey si wanaagsan ayay u ciyaareen, qof kastaana wuu garanayaa in Emery uu yahay tababare fiican.” Sidaas ayuu yidhi Neymar oo wariyeyaal kula hadlayey magaalada London.
“Waanu ognahay tayada Arsenal, waxaanan ku faraxsanahay inaan la soo shaqeeyey Emery, sababtoo ah waa nin shaqo badan. Xaqiiqadii waxaanu doonaynay inuu sii ahaado tababarahayaga oo aanu ka barano kubadda cagta.
“Waxay ila tahay in Arsenal oo ah koox weyn oo muhiim ka ah halkan England inuu u keeni doono waxyaabo wanaagsan, waxaanan u rajaynayaa guul” ayuu ku daray.
Arsenal ayaa xili ciyaareedkan guuleysatay 11 jeer oo isku xigta, waxayse simbiririxatay kaddib saddex barbar-dhac ah oo beddelay guulihii joogtada ahaa, waxase ka muuqata isbeddel weyn oo ku dhacay xili ciyaareedkan intii uu tababare Emery shaqada hayey.